Aiza ary ho aho ilay zokibeko iny? Tena naha te hidera ahy aloha ny fihetsikao ilay tsy niteny intsony taorian’i Beronono tafiditra teto an-tanindrazana e ! Tadidiko mihitsy ianao tamin’ny fotoan’androny nibitabitaka mihitsy nilaza hoe lainga iny rangahy raha tafaverina eto aa ! Kinanjo ! Inona ry Jean ny zava-niseho ? Tonga ihany ny anao mba nilalao e ! Dia inona koa ny zavatra hafa niseho ? Tankina i Jean tamin’izay fotoana izay leaza aa ! Dia tena nangina any ! Izany ny tena hoe tsy nahaloa-peo fa dia nimpirina. Iza Gasy moa hoe ianareo ry Jean tamin’ireny fotoana ireny ? Tena mahatsikaiky ahy ianao ry Jean ka ! Manaraha ihany dia mba mitsiahy ny lasa aloha dia mandinika ny ankehitriny eo am-pijerena fitaratra. Na izaho koa aza anie ry Jean mba maniry hoe : hihoatra an’izany izao ianao io ! Fa tsy hoe izy Zoulou mainty dia ianao Gasy. Jereo aloha ny fitaratra ee ! Ny hoavy mbola… ho avy!